टिचिङ अस्पतालमैं डा. केसीकाे बिराेध, चिकित्सक संघद्वारा भने अान्दाेलनमा उत्रिने चेतावनी – Everest Dainik – News from Nepal
टिचिङ अस्पतालमैं डा. केसीकाे बिराेध, चिकित्सक संघद्वारा भने अान्दाेलनमा उत्रिने चेतावनी
काठमाडौँ, माघ १८ गते । पटक पटक अनशन बसेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको सेवा प्रवाहमा डा. गोविन्द केसीले अवरोध पु¥याएको भन्दै अस्पतालका चिकित्सक तथा कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । अनसन र अबरोधबाट अस्पतालको सेवा र प्रतिष्ठामाथिनै प्रश्न उठ्न थालेको उनीहरुको धारणा छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक, प्राविधिक, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सलगायतले डा. केसीको अनशनले सेवा प्रवाहमा अवरोध आई बिरामीहरू निजी क्षेत्रको अस्पतालमा जान बाध्य भएको बताउनुभएको छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा त्रिविका प्राध्यापक डा. प्रदीप ज्ञवालीले डा. केसीको अनशनका कारण अस्पतालमा बिरामीलाई समस्या परेको बताउनुभयो ।
उहाँले अनशनकै कारण अस्पताललाई करोडौँ रुपियाँ रकम घाटा भइरहेको बताउनुभयो । हरेक अनशनका बेला अस्पताललाई दुई करोड रुपियाँ घाटा हुने गरेको भन्दै त्रिवि अन्र्तगतकै कर्मचारी भएर सरकारको विरुद्ध लाग्नु उचित नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले अस्पताल परिसरभित्र कुनै पनि अनशन हुनु दुर्भाग्य भएको भन्दै अस्पताल बाहिर गएर रिले अनसन गर्न नेपाल चिकित्सक संघलाई अनुरोध गर्नुभयो ।
उहाँले अस्पताललाई अनशन तथा हड्तालमुक्त क्षेत्र बनाउनुपर्नेमा जोडदिँदै अस्पतालभित्र भइरहेको अनशनले आम सर्वसाधरण उपचार नपाएर निजी स्वास्थ्य संस्थामा जानुपरेको बताउनुभयो ।
उहाँले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सुरुका अनशनमा डा. केसीलाई आफ्नो पनि साथ रहेको भन्दै पछिल्ला अनशनहरु राजनीतिक रूपमा प्रेरित हुन थालेकाले आफूहरु विरुद्धमा उत्रनुपरेको बताउनुभयो ।
डा. ज्ञवालीले चिकित्सकहरुको पेशागत संस्था मानिएको नेपाल चिकित्सक संघमा चरम राजनीति भएको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले २० हजार चिकित्सकमा पाँच हजार मात्र संघ अन्तर्गत रहेको भन्दै संघले अस्पताल बन्द गर्ने, अबरोध गर्नेजस्ता आन्दोलन जारी राखे संघ फुट्नसक्ने चेतावनी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा पूर्व सहायक डिन प्रा.डा. रतिन्द्र श्रेष्ठले अस्पताल राजनीतिक गर्ने स्थल बन्न नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा केसीका सम्र्पूण माग पूरा गरे पनि केसीले राजनीतिक मुद्धा उठाएर राजनीतिक गोटी बन्नुभएको बताउनुभयो ।
क्याम्पसका पूर्व प्रमुख प्रा.डा. रामप्रसाद उप्रेतीले एकजना व्यक्तिको लागि सयौ बिरामीहरूलाई मर्का परेको बताउनुभयो ।
उहाँले चिकित्सा क्षेत्रका मागसँगै डा. केसीले राजनीतिक माग अगाडि सार्नुले उहाँमाथि शंका व्यक्त गर्ने प्रशस्त ठाँउ रहेको बताउनुभयो ।
यसैबीच, नेपाल चिकित्सक संघले डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि भन्दै शुक्रबार देशभरका अस्पताल आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य सबै सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । अनशनको २३ दिनसम्म सरकारले डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि कुनै पहल नगरेको भन्दै संघले सरकारलाई दबाब दिन आकस्मिक बाहेकका अन्य सबै सेवा बन्द गर्ने भएको हो । नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले सरकारले केसीको माग पुरा नगरे अनिश्चितकालिन बन्द गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
डा. श्रेष्ठले बन्दमा सरकारी, गैरसरकारी, निजी तथा मेडिकल कलेजका आकस्मिक बाहेकका कुनै पनि सेवा सञ्चालन नहुने
यसअघि संघले डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि भन्दै तीन दिन अघि त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसर देशभरका आफ्ना शाखा कार्यालयमा रिले अनशन सुरु गरेको थियो ।
– अाजकाे गाेरखापत्र दैनिकमा सराेज ढुङ्गेलकाे समाचार प्रकाशित छ ।